Richard Stallman muBuenos Aires Argentina Mbudzi 2008 | Linux Vakapindwa muropa
Chirevo kubva kuna Rena - Richard Stallman muBuenos Aires
Ndisati ndatanga neaccount / mushumo wekuti chii chiitiko ichi, ndinoda kukumbira ruregerero nekunonoka kweichi chiitiko chekuvhara chiitiko, asi zvakaitika ndezvekuti mavhidhiyo akatorwa mifananidzo yemhando yepamusoro, imwe yacho yairema 134 Mb, uye imwe 195 Mb ... saka kuiisa kuFTP kuti igadziriswe gare gare kwakatora nguva yakareba ...
Kune rimwe divi ndinozvizivisa ... ndiri Renato [aka: renateitor] uye ini ndaive LXA mutori wenhau! pachiitiko ... sezvo ndiri pano, ndinotora mukana uno kutenda vakomana (nemusikana: P) nekunditendera kuti ndiite chirevo, uye neyakajeka vibes iyo yatakabatana nayo kuronga chiitiko chechiitiko.
Kana iyo mamiriro ezvinhu ajekeswa, ngatitangei kubhizinesi:
Ini ndakasiya chiteshi Mar del Plata kusvika nguva dza07: 00 mangwanani uye ini ndakasvika pa Buenos aires guta nguva dza13: 00 masikati neMuvhuro ... zuva raizoitika chiitiko ...
Mushure mekusangana neshamwari yangu uye nekutipa isingadiwe uye isina kurongwa nzira yepasi pevhu iyo yakatora dzinoda kuita maawa matatu (verenga: isu taisatomboziva kwataive takamira xD) isu takazosvika Congress yeNyika.
Tichingosvika panzvimbo yechiitiko (kuma15: 50pm) takaona kuti vekutanga vasingashiviriri vanga vatosvika, uye tinogona kuverenga vangangoita gumi nevashanu kana makumi maviri vanhu vakamirira kutanga kwechiitiko ... takaenda kunhau chikamu, uye mushure mekumwe kunzvenga kufamba (?) takakwanisa kupinda muchiitiko ichi (na15: 20) ...
Kana vakatarisa flickr yangu… Unogona kucherechedza kuti kune mamwe mafoto ehurongwa hwechiitiko .. uye kunyange zvimwe
mifananidzo yekusvika kwe Stallman na16: 30 p.m.
Paakangosvika Richard, chinhu chekutanga chaakaita kukumbira imwe caffeine neshuga nekuda kwekuneta kwake kukuru ... izvo zvakaonekwawo panguva yese yekuratidzira .. sekutaura kwaakaita iye ega hurukuro isati yatanga, kwemazuva akati wandei anga asina kurara kupfuura 3 kana 4 maawa pachiitiko cherwendo rwaaitora ... zviri pachena kuti vakamupa Pepsi ... sezvo ini ndisingade kufungidzira zvaakaita kubva pakumupa Coca-Cola (nekuti anovenga kuzvitonga).
Pakati pechinhu nechimwe, yaive 17:50 pm, panguva iyo vakavhurira veruzhinji uye vakatanga kuzadza nevanhu ... mushure memaminitsi gumi hapana akapinda munzvimbo iyi, uye sezvandakanzwa kubva kune mumwe wavo. kubva kune varongi veVia Libre, pakati pe10 ne150 vanhu vakatadza kupinda mumusangano [wow!] (uye kuti vanhu vazhinji vakapfuura ndokugara pasi kana zvigaro zvapera) ...
Chinhu chimwe chakandibata ndechekuti vaive vaisa zvigaro mazana maviri nemakumi mashanu nemashanu mumba ... ruzivo rwakanyanya rwechokwadi kuva rwechokwadi (^ _ ^) ... chokwadi ndechekuti ini handina kuwana kutsigira ichi chokwadi, asi ndizvo zvaiitwa nevarongi.
Munguva yehurukuro, Richard akaburitsa hunhu hwake hwekuseka uye nenyasha, zvichiita kuti hurukuro ive inotsungirira.
Kutanga akataura zvishoma nezve nei Free Software, zvakwakanakira, mutsauko nesoftware, uye misiyano ne Open Source... Akasimbisawo kanopfuura kamwechete chokwadi chekuti GNU ndiyo system uye Linux ingori imwe yake tsanga.
Mushure mesumo yataurwa pamusoro apa, akataura zvakawanda pamusoro pedzimwe pfungwa dzinonakidza ... pakati padzo zvinotevera kumira:
• Mahara Software mune Dzidzo
• Mahara Software muEconomy
• Mahara Software muHurumende
Kamwe kana misoro yese yaizokurukurwa yainge yakurukurwa, iye akaita mufananidzo unonakidza we Mutsvene IGNUCIUS, hunhu hunokuita kuseka zvinonzwika ... kupfuura chero chinhu mushure mechinguva chehurukuro "yakakomba" (mune makotesheni nekuti anogara achiisa kuseka pakati penyaya nemusoro wenyaya)
Mushure mekuratidzira kwake, kwakagara angangoita maawa maviri nehafu, Stallman Akagadzirira kupindura denderedzwa remibvunzo, iyo yaive yakasiyana kwazvo uye inobata pamisoro dzakasiyana ...
Nezve yako bookbook, Ndinorangarira izvozvo f zvinyorwa aida kuziva kuti zvainge zvakaita sei uye aishandisa rudzii ... saka hapana imwe nzira irinani yekuziva kunze kwekuuya kubva pamuromo wake ... sekutaura kwandinoita: kusvika Chikunguru akashandisa imwe chete OLPC, panguva iyi akaona kuti Negroponte Aive ave kuzovagadzira pamwe naWin, saka akasiya bhuku rezvitoro ndokutenga kabhuku kekubva kuChinese mavambo ayo achiri muchirongwa chekudzikisa mitengo yekutengesa kwayo kukuru (zita racho rakaritumidza zita iri asi rakanga risingazivikanwe zvachose nekuti harina kupiwa kukomputa munhandare yepasi rose) ... sezvaakataura, akadaro bhuku remabhuku rinoshanda neimwe nzira isiri iyo Bios (chivakwa MIPI modified), saka system haina kumbobvira Windows inogona kushanda pamuchina wakataurwa ... (zvakasiyana nezvakaitika ne OLPC)
Mushure memibvunzo ingangoita gumi nembiri kana gumi neshanu, kutenderera kwakavharwa uye nekuombera maoko chiitiko chakapera ...
Asi zvese hazviperere ipapo ...
Mushure meizvozvo, munhu wese akauya kuzotora mifananidzo naGuru uye ndokubvunza icho chakataurwa chimiro kusaina mhando dzese dzezvinhu ... kubva mabhuku vakakwira shawa maketeni xD
Kupedzisa, ndinogona kutaura kuti chiitiko ichi chaishamisa ... misoro yenyaya yakakurukurwa kune vanotanga vakapinda muchiitiko ichi, uye chakanyanya kukosha ndechekuti akapa hurukuro inonakidza kwazvo nezvekushandiswa kwe Soft Libre mune dzidzo, economics uye zvematongerwo enyika... Yaive hurukuro inodzidzisa kwazvo uye inodzidzisa.
Chekupedzisira, ndinoda kujekesa zvakadzama: sekuziviswa kwatakaita kuvamiriri venhau, zvinyorwa zvekutepfenyura redhiyo neterevhizheni zvichagadzirwa Mugovera uno, sezvo Richard anga akaneta uye zuva raitevera aibuda achienda kuUruguay kuenderera mberi nerwendo .
Ndinovimba unofarira chirevo uye chakakwana zvakakwana ... kana iwe uine chero mibvunzo, unogona kuisiya mumashoko uye ini ndichaipindura pasina dambudziko.
Kana iwe uchida kuona mamwe mafoto, aripo boka re flickr iyo yakagadzirwa chete kune vese vaipinda kuisa mifananidzo yavakatora ...
Kwazisai vese, uye zvakawanda nekutenda kune vakomana paLXA! yekundipa uyu mukana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Chirevo kubva kuna Rena - Richard Stallman muBuenos Aires
Alejandro Diaz-Caro akadaro
Mhoro! Ndekupi kwandinogona kurodha pasi mavhidhiyo awakati iwe wakaisa kune FTP?
Pindura kuna Alejandro Díaz-Caro
Mhoro Alejandro. Mavhidhiyo akakonzerwa nematambudziko angu haana kuiswa chero kupi. Asi iwe unogona kuona kana kurodha pasi musangano wese kubva ku vimeo:
Kune maviri zasi uko.
Kana iwe uchibva kumaBS, ipapo iwe waive uine shamwari patsva. Kune inotevera, isu tinoronga rwendo pakati pevashandisi veLXA, saka hapana munhu anonzwira tsitsi kuenda ega.
Mhoroi, mushumo wakanaka kwazvo ... ndaive nerombo rakanaka kuvapo uye hurukuro yacho yanga yakanakisa ..
Mubvunzo, mavhidhiyo aunotaura ... vari kuenda kunovatumira kuti vaaunze? sezvo ndinoda kuvapfuudza kune vanhu vasina kudaro, vane mukana wekunzwa zvakataurwa naStallman ..
Kune inotevera, zvakataurwa naEsty zvinoita kunge zvakapora.
«Kune rinotevera, isu ticharonga rwendo pakati pevashandisi veLXA, saka hapana munhu anonyara kuenda ega.»
Zano rakanaka kwazvo: D: D
Juan C: kune izvo ungadai wakaenda. Kune inotevera, isu ticharonga hofori skrini muPatio Olmos de Córdoba uko munhu wese anogona kuteedzera iko kutapurirana kunorarama. Rena, inotevera nguva tichaita yakananga kubatana.
osuka: Ini handifunge, saka anoenda kuUruguay kana Paraguay, uye nemugovera anodzokera kuArgentina kunopa musangano wenhau.
Handikwanise kutenda zvandakarasikirwa ... ndine hurombo, nekuti dai zvisina kudaro ndingadai ndakaedza kuenda, kunyangwe muchokwadi zvaisazoenda zvega ...
Ehe, zvaive zvakanaka kuenda wega. Ndakaenda ndega uye ndainakidzwa nazvo, zvakare pamwe ndaiziva musikana wegeek (izvo zvisina kuitika) haha. Asi zvaive zvakanaka kwazvo, zvakapfuura zvandaitarisira uye neniwo ndakapusa nekuseka.
Mubvunzo: Pane chero munhu anoziva kwandingawane mifananidzo iyo Richard yakatora nevateereri? Iwo akatorwa nemutori wemifananidzo.
Zvakawanda zvepamusoro zvinyowani uye kushomeka kushoma kweshoko raStallman.
Ivo havazive kana achiuya kuMexico? :(
Ini ndinoongorora asi nha ..
Yakanaka ReNa. Yakanaka mushumo ...
Vanhu veCordoba vanogara vachitarisa kuti zviitiko zvakakosha sei zvinoitwa mu "Hofisi yaMwari" ...
Uye Federalism iripi?
Federalism iri muBuenos Aires, sezvakakodzera ...
Akanaka Rena! Ndatenda nemushumo !!! Uye rupo rwekugovana.
Chiitiko chacho chakava chikuru. Zvichida ingadai yakave iri zano rakanaka kwavari kuti varironge munzvimbo yakakura. Asi pamwe nekugara, nyaya ndeyekuti ini handina rombo rakanaka kuti ndisagone kugara pasi kuti nditeerere musangano zvakanaka, asi zvaive zvakanaka.
Ini ndakazopedzisira ndawana mifananidzo iyo mutori wemifananidzo akaenda nesu naRicardito Stallman. Rena anoonekwa zvakare.
Uye pano vanhu veVía Libre vakatumira iyo yakazara vhidhiyo, iine mibvunzo nezvose.